Fahad Yaasiin Muxuu Ka Yidhi Gabadhii ...iyo Soomaliland. - Wararka Khaatumo , Somaliland , Puntland Iyo Somalia
HomeSomalilandFahad Yaasiin Muxuu Ka Yidhi Gabadhii …iyo Soomaliland.
Fahad Yaasiin Muxuu Ka Yidhi Gabadhii …iyo Soomaliland.
September 20, 2021 News Somaliland, Wararka Maanta 1
Waxaan shaki ku jirin in dagaaladii W/Galbeed ay dowladdii hore ku kacday qaabab ka fog xuquuqda aadanaha, waxay kamid tahay falalkii ugu foosha xumaa ee ay dowladdii hore ku dhaqaaqday, waana dhacdo ay taariikhdu si daacad ah u xusi doonto, annagoo maanka ku hayna in ciddii dhibkaas geysatay uu ahaa maamul dhisnaa oo ay Soomaali oo dhami kuwada jirtay, ayna kamid ahaayeen ragga hadaba haya jagooyinka ugu sareeya “Somaliland”.
Tilmaantii oo qaldantay iyo darawalkii gaariga oo si khaldan wax u fahmay ayaa meesha ay maanta Samsam taallo gaarsiisay. Inta ay Saxaafaddu ogaatay iyo wax kaloo ka sii xun, ayey Samsam lugta lagashay. Qofkaad rabto ahoow oo, hadaad adigu maanta joogto halka ay Samsam bidatay, maxaad ka sugi lahayd dadka aad isku dhiigga, isku diinta, isku dhaqanka, isku haybta, iyo isku dadkaba tihiin? Samsamey hadaad ka sugaysay iney ku tusaan gurgii kaa khaldamay, kumey toosinee xabsi bey ku dhigeen. Markaad xabsiga gashay, hadaad islahayd Abtigaa oo ordaya ayaa imandoona, oo isla-markiiba ku soo dayn, dammiinba Allaha ka dhigee, wuu kuu soo gurmanayaa, inuu kusoo daayo iska dhaafee, isagii baa dhuuntay, oo aan ilaa iyo hadda ku dhiiran inuu xitaa sheego inuu waaridkaa ahaa. Askarigaad islahayd intuu damiirkiisa qabto ayuu kula carari-doonaa, isagii baaba —sey saxaafadu qortay— ku kufsaday oo jirkaagii daahirka ah faraxu-meeyey.
Haday inta ilamadii kaa qubatay ood filaysay iney odayaashii dhaqanka kuu soo gurmadaan. Madhicin taas, oo mindhaa hawsha tolka ay u hayaan, mid ka baxsan ayey u arkeen. Hadaad xijaabkaad xirneyd Madaxweyne ku xigeenkii baaseysatay oo uu yiri, bidcadan aduunka ka qariya, oo markaad hadalkaas maqashay is tiri, malaha Wahaabiyadii dartood laguu ciqaabay baa degdeg kuu soo gaari doona, taasina ma dhicin oo, iyaguna caadadoodii ahayd, horta wax hala hubsado ayey kujiraan. Hadaad is tiri xisbiyaddii mucaaradka ku ahaa “dowladda” ayaa ka faa’iidaysan doona dhibka kusoo gaaray, taasi madhicin oo iyagana wali ma’ogaan inaadba kamid tahay hawlaha ay utaaganyihin.
Walaalleey Samsameey, waxaan sugayaa adoo goordhaw banaanka jooga oo noo sharxa wixii xilka lahaa ee ay kugula-keceen kuwii anshaxa xumaa ee dunida kaaqariyey. Waxa Samsam ku dhacay waxay tilmaan u tahay in “hogaanka Somaliland” uusan garosho iyo horumar dhaamin kii Dektaa-tooriyada.
Hannoo danbeyso in “Somaliland” ay ka go’eyso Soomaaliya inteeda kale’e, bal haddaan wali isku dhaqan-nahay, oo aad qadarineysaan sharafta haweenka, waxaa waajib idinku ah inaad degdeg usii daysaan Samsam oo ah Gabadh 16-jir ah oo ardayad ka’ah Iskuul ku yaal Boosaaso. Rabbow adaa Samsam u maciin ah.
DAAWO VIDEO:Barnaamijka Kaftanka Siyaasada iyo Siro Badan Khilaafka Rooble iyo MD Farmaajo.
XOGTA Gabadh Soomaaliyed oo Xijaabkeeda Lagu Cunsuriyey Aduunka oo Turkiga u yeedhay Shaqana siiyey
war ninkani dhib badanaa, ma ceel buu ku dhashay, mise waa laga been sheegay?